Yintoni i-LinkedIn? | Martech Zone
NgoLwesibini, Julayi 1, 2008 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Yintoni LinkedIn? Kutheni le nto kufuneka ujoyine i-LinkedIn? Nantsi enye ividiyo entle evela ebantwini CommonCraft ngesihloko nje!
Nxibelelana nam kwi-LinkedIn.
tags: ubiza isenzompuma mpumaamaziko eenkcukacha zobomiintaka encinciInkqubo yokoumbhalo
Jul 1, 2008 ngo-4: 56 PM
Enkosi ngokwabelana ngale intro intle kwi-LinkedIn. Kulabo abangaqhelekanga kwesi siza, oku kuchaza into elula, ecacileyo, kwaye echanekileyo. U-Lee kunye no-Sachi we-CommonCraft benza umsebenzi omangalisayo ngendlela yabo ye-PaperWorks.
Inye kuphela into endizokuyithetha kukuba i-LinkedIn ayisiyiyo yonke into esebenzayo, ubukhulu becala yokufumana okanye ukufumana abathengisi. Indlela ekhankanyiweyo ifuna ukuba utyhalele iimfuno zakho ngexesha onalo kubantu abanokuthi bangabinalo ixesha okanye bangathunyelwa kuwe. KwiVendorCity, siyibuyisile le nkqubo kwaye sicela abanini bamashishini kunye neengcali ukuba zibeke iingcebiso zabo kwi-intanethi. Ngale ndlela, ihlala ikhona kwaye iyafikeleleka mzuzu apho kufuneka khona isidingo. Ayisiyiyo kuphela into yokuba ukwazi ukufumana kwangoko umthengisi omfunayo xa kuvela isidingo, ukwabuyekeze abathengisi abalungileyo ngamashishini ongezelelweyo kuye nakubani na okuphakathi kweVendorCity.
Ngendlela, elinye inqaku elilungileyo kuthungelwano lweshishini kutshanje lithunyelwe ngumnini-shishini wase-UK B2B. Ingabonakala apha:
UDouglas, ndiyathemba ukuba uza kuthatha umzuzwana ukujonga iVendorCity.com njengoko sicinga ukuba yahluke ngokupheleleyo kwaye yindlela engcono yokwenza uthungelwano lweshishini kunye nokufumana abathengisi abaphambili kwindawo yakho. Ndiyeke umgca ukuba ucinga ukuba unayo ixesha lokuncokola malunga nomxholo.